Qaramada Midoobey, “Shaqo La’aantu Waa Dhibka Dhalinyarada Soomaaliyeed Haysta” – Radio Daljir
Qaramada Midoobey, “Shaqo La’aantu Waa Dhibka Dhalinyarada Soomaaliyeed Haysta”
Luulyo 19, 2017 10:39 b 2
Wakiilka Qaramadda Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Micheal Keating, ayaa waxaa uu ka hadley dhibaatooyinka shaqa la’aanta xoogan ee dhalinyaradda Soomaaliyeed heysata.
Micheal Keating ayaa sheegay in shaqa la’aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahay mid aad u sareyso ayna u baahan yahay xirfado iyo aqoon ay ku shaqaystaan si meesha looga saaro shaqo la’aanta oo uu tilmaamay in ay qayb ka tahay dhibaatada ka jirta gudaha dalka Soomaaliya.
Isagoo sii hadlayay ayaa waxaa uu intaasi ku daray in marka la eego warbixinta ay soo saareen ururka shaqaalaha aduunka ee dalka Soomaaliya ay sheegeen in 33% ay shaqeeyaan halka 67% ay shaqo la’aan yihiin.
Ugu danbeyn Qaramadda Midoobe ayaa la sheegayaa in ay aduun lacageed gaaraya ilaa iyo 17.5 Milyan oo Dollar ay ugu talagashey arimaha horumarinta dhaliyaradda Soomaaliyeed iyo u tababarista xirfado shaqo oo ay ku shaqeystaan.
Wakiilka QM ayaa Garoowe waxa kale oo uu u yimid si uu ula socdo, war suganna uga helo, isbaddalka siyaasadeed ee ka biloowday Puntland oo aan hadda la saadaalin karin, mooshin kabacdi, meesha uu cagta saari doono.
Galmudug oo lagu Eedeeyey in ay Shacab ku Laysay Dhabbad (dhegayso)
Abdishakuur ahmed 1 month ago
Shaqo doone ayaa ahay
Shaqo doone ayaan ahay